Nkwụ ụgwọ ụgwọ Math | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 30, 2006 Tọzdee, Nọvemba 30, 2006 Douglas Karr
Enweela m kaadị ụgwọ ụgwọ maka oge ma nweta email na enwere m ụyọkọ ego m nwere ike iji. Enwetara m ntanetị ma debanye aha na weebụsaịtị ha. N'oge ahụ, ha chọrọ ikele m maka ndebanye aha m ma jiri otu n'ime nhọrọ atọ kwụghachi m ụgwọ:
20% kwụsịrị otu ihe mgbe m tinyere $ 20 ma ọ bụ karịa
Ihe ọoụ hotụ na-ekpo ọkụ nke 12oz n'efu
$ 10 mgbe m tinyere $ 50 ma ọ bụ karịa
Onwere onye ozo huru ya na ihe nzuzu # 1 na # 3 bu otu? Ọ bụrụ na m mefuo $ 50, ihe mkpali ahụ ekwesịghị ịbụ ihe karịrị 20%?
Ma eleghị anya, ọ bụ naanị m. Otú ọ dị, enwere m ekele maka ya! Na… M hụrụ n'anya n'anya n'anya!
Networkkpụrụ Omume Ntanetị - Abụla SNOB
20% kwụsịrị $ 100 = $ 20 kwụsịrị
$ 10 kwụsịrị 100 = $ 10 kwụsịrị
Ọ bụghị otu ihe ahụ.
Aug 9, 2007 na 2: 07 AM
Ọ bụ ya mere aha ahụ bụ 'ókè ji akwụ ụgwọ mgbakọ na mwepụ', ya bụ, ọ nweghị uru ọ bụla iwere $ 10 na $ 50 ma ọ bụ karịa coupon.
Jenụwarị 4, 2011 na 2:11 PM
Ihe dị iche n'etiti 1 na 3 bụ na # 1 nwere ike tinye n'ọrụ n'otu ihe. # 3 bụ maka ihe ndị a na-akparaghị ókè.